कमल थापाले भिडिओ सार्वजनिक गर्दै भने, ‘ मलाई जस्तो आपत् अरूलाई आइनलागोस्’ – हाम्रो देश
काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले कोरोना जितिसकेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिएर १० दिन अस्पताल बसेका थिए । कोरोना संक्रमित भएको बेलामा आफुले भोगेको पी डा बारे बताउँदै उनले एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका छन् ।
आफू १० दिनसम्म आईसीयूमा बस्नुर्दा र ३ वर्षे नातिसहित परिवारका सबै सदस्य संक्रमित हुँदा ठूलो पी डा र कष्ट भोग्नुपरेको भिडिओमा भनेका छन्।
विगतमा आफूलाई परेजस्तो पी डा कुनै पनि नेपालीको परिवारलाई नपरोस् भनेर सजगताका सुझावसहित भिडिओमार्फत चेतावनी दिएका हुन्। ‘कोरोना महामारी अत्यन्तै विकराल र डरलाग्दो भइरहेको छ,’ मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको भिडिओ सन्देशमा उनी भन्छन्, ‘केही समयअघि म आफैं पनि कोरोना संक्रमित भएर १० दिन आईसीयूमा बस्नुपर्‍यो। मेरो परिवारको ३ वर्षे नातिदेखि लिएर सबै जना संक्रमित भयौं। त्यसबाट परिवारले धेरै ठूलो पीडा र कष्ट भोग्नुपर्‍यो।’
कोरोना महामारी डरलाग्दो र विकराल हुंदैछ।
मास्क प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, साबुन पानीले हात धोऔं!
आफु पनि बाँचौ, परिवार र समाजलाई पनि बचाऔँ!!
सरकारको मात्र भर नपरी नागरिक दायित्व पनि निर्वाह गरौँ pic.twitter.com/n1C6D72ML4
— Kamal Thapa (@KTnepal) April 27, 2021